मुख्य समाचार – Page 574 – दाङ खबर
Jun282018 by DangkhabarNo Comments
घोराही उपमहानगरको नीति कार्यक्रम र बजेट पारित
घोराही, असार १४ । घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ । स्थानीय सरकारका हैसियतले केन्द्रीय सरकारले झै संसदिय अभ्यासको झझल्को दिने गरी यही असार ९ गते नीति कार्यक्रम र १० गते बजेट ल्याएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई घोराही उपमहानगरले नगरसभा सदस्यहरुको सुझावसहित आवश्यक संशोधन गरी सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । नगरको समृिद्ध र नागरिकहरुलाई अधिकतम सेवा सुविधासहित अधिकार प्रदान गर्ने सवाललाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यक्रमलाई पारित गरिएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा नगरको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राखेको उपमहानगरले विषेश गरी सडक पूर्वाधार बलियो बनाउने गरी नीति कार्यक्रम र बजेटको निर्धारण गरेको उहाँको भनाई छ । बलियो सडक पूर्वाधार विना अन्य विकासहरुलाई पूर्णता दिन अप्ठेरो हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा
वाँकेमा यस वर्ष ३६ हजार ५०० हेक्टरमा धान खेती गर्ने लक्ष्य
नेपालगन्ज, असार १४ । बाँकेमा निर्माण भइरहेका विकासका योजनाको जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन थालेको छ । समन्वय समितिका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तवले संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्पष्ट निर्देशिका नआएपछि समिति बैठकले आफ्नो छुट्टै निर्देशिका बनाएर अनुगमन शुरु गरेको हो । समितिले जिल्लामा सञ्चालित साना तथा ठूला विकासका योजनाको अनुगमन गर्ने र काममा ढिलासुस्ती, अनियमितता भएको पाइए आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकायमा सिफारिश गर्ने उहाँले बताउनुभयो । अनुगमन गर्नुअघि जिल्ला समन्वय समितिले संयोजक श्रीवास्तवको नेतृत्वमा समितिका सदस्यहरु चेतबहादुर घर्ती, जानुका क्षेत्री र प्रशासकीय अधिकृत भरतबहादुर मल्लसहितको टोली गठन गरेको छ । धान रोपाइँ शुरु वर्षा भएपछि यस वर्ष जिल्लाका कृषकले धान रोपाइँ शुरु गरेका छन् । जिल्लामा यस वर्ष ३६ हजार ५०० हेक्टरमा धान खेती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्ष ३४ हजार ६६
८ करोडको लगानीमा दुई सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुँदै
रुकुम, असार १४ । रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा दुई सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुँदैछ । त्रिवेणी गाउँपालिका–२, सिम्रुतुमा झण्डै रू. आठ करोडको लगानीमा विद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको हो । ‘रुकुम उज्यालो कार्यक्रम’ अन्तर्गत सिम्रुतुखोला जलविद्युत् सहकारी संस्थाले विद्युत् उत्पादन गर्न लागेको हो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको रू. पाँच करोड, स्थानीयवासीको रू. दुई करोड र सिभिल बैङ्कको रू. एक करोड ऋणमा विद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको हो । अहिलेसम्म आयोजना निर्माणको काम करीब ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । नहर निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको सहकारीका अध्यक्ष लक्ष्मण ओलीले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणको प्राविधिक जिम्मा गौरा कन्सट्रक्सन र हाइड्रो इनर्जीले लिएका छन् । डेढ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ साल माघमा सम्झौता भएको थियो । असार मसान्तसम्म काम सक्नुपर्नेछ । विद्युत् उत्पाद
काठमाडौँ, असार १४- यस वर्षको मनसुन देशैभरि फैलिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मनसुनको प्रभावले तीन दिनसम्म देशका धेरै स्थानहरुमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको हो । देशका पूर्वी र मध्यका केही स्थानमा सक्रिय भएको मनसुन बुधबारदेखि मध्य हुँदै पश्चिमतर्फ फैलिएको मौसमविद् सुवास रिमालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार क्रमिक रुपमा मनसुनी वर्षाको गतिविधि बढ्नेछ । आज पनि देशका अधिकांश भेगमा बदली र केही स्थानमा वर्षा भएको छ । आज साँझ र रातितिर काठमाडाँै उपत्यकासहित देशका केही स्थानमा वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले यस वर्ष जेठ २५ (जुन ८) देखि पूर्वी भेगबाट नेपालमा मनसुन प्रवेश भएको घोषणा गरेको थियो । मनसुन घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण रुपमा सक्रिय हुन नसक्दा पर्याप्त वर्षा हुन सकेको थिएन । महाशाखाको पछिल्लो
महिलामाथि निर्घात कुटपिट गर्नेलाई ६ महिना कैद
दाङ, असार १४ । गत जेठ २५ भालुवाङमा अर्घाखाँची सितगंगा नगरपालिका वडा नं. ९ ठाडोखोलाकी दिलमाया पुन मगर माथी कुटपीट गर्ने दुई महिलालाई ६ महिना कैदको फैसला गरेको छ । कुटपीटमा संलग्न राप्ती गाउँपालिका वडा नं. एक भालुवाङकी रेखा गुप्ता र अनिता गुप्तालाई २५ हजार जरिमाना सहित ६ महिना कैदको फैसला गरेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । फैसला पछि दुवै जना गुप्तालाई तुलसीपुर स्थित कारागार चलान गरिएको प्रजिअ श्रेष्ठले बताउनुभयो । कुटपीट पछि लागेको उपचार खर्च बाफतको सात हजार रुपैयाँ समेत पीडकले दिने गरी फैसला गरेको प्रजिअ श्रेष्ठको भनाई छ । गत जेठ २६ गते सामाजिक सञ्जालमा दिलमायालाई कुटपीट गरिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि कुटपिटमा संलग्न दुई महिलालाई २७ गते नियन्त्रणमा लिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रविन्द्रराज पाण्डेले बताउनुभयो । रेखा र
भक्तपुर, असार १४- भक्तपुरमा विगत ६ महिनामा १३ बालिका तथा किशोरी बलात्कारका घटनाबाट पीडित भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० ले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०१९ का लागि आयोजना गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि सविना केसीले सो व्यहोरा सार्वजनिक गर्दै २०१८ जनवारीदेखि २७ जुनसम्म हत्या, कुटपिट बलात्कार तथा बलात्कार प्रयास, बाल यौनशोषण तथा दुव्र्यवहार, बहुविवाह लगायतका २४ वटा घटना भएको बताउनुभएको हो । ती घटनामा तीन जनाको हत्या, एकको हत्या प्रयास, दुईजनामा बलात्कारको प्रयास र पाँच महिला बहुविवाहबाट पीडित भएको उजुरी परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष भने यो अवधिमा पाँच जनाको हत्या, चार जनाको बलात्कार, चार जनाको बलात्कार प्रयास भएको, दुईले बहुविवाह गरेको र दुई मानव बेचबिखनका घटनाको उजुृरी परेको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक हिमाल
बृक्षरोपण दिवशको अवसरमा १ सय २५ बिरुवा रोपियो
मनिषा राई रोल्पा, असार १४ । राष्ट्रिय बृक्षरोपण दिवश २०७५ को अवसरमा घर्तीगाउ इलाका वन कार्यलय रोल्पाले लक्ष्मीडाडा महिला सामुदायिक बनमा बृक्षरोपण गरी मनाएको छ । बृक्षरोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा इलाका बन कार्यलय घर्तीगाउ रोल्पाका प्रमुख भानुभक्त बस्यालले मानिसलाई अत्यावश्यक अक्सिजन र स्वास्थ्यको लागि बृक्षारोपण फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै रोपिएको विरुवाहरुलाई स्थानियबासीहरुले आफ्नो सम्पति बुझि रेखदेख तथा संरक्षण गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माडी गाउपािलका रोल्पाका उपाध्यक्ष धनिकला घर्ती बुढामगरले गाउँपालिकालाई पूर्ण रुपमा वातावण स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाउने उदेश्यले गरिएको यो कार्यक्रमबाट स्थानियबासीले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा बिभिन्न १२५ जातका विरुवाहरु रोपिएको छ । कार्यक्रममा ब
पहिरोमा सातघर पुरिए, तीनजनाको मृत्यु, दुई बेपत्ता
धादिङ, असार १४- धादिङ जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने सत्यदेवी र मार्पाकमा गएराति पहिरो जाँदा तीनजनाको मृत्युभएको छ भने दुईजना बेपत्ता भएका छन् । सात घर पहिरोले पुरिएको छ भने चारजना घाइते भएका छन् । दुई दिनदेखि परेको वर्षाका कारण खनीयाबास गाउँपालिका–५ स्थित सत्यदेवीको साईश्वाँरामा गोले जेठा भनिने राजु गोलेको घर पहिरोले बगाउँदा गोलेकी श्रीमती ३६ बर्षीया वसोधा गुरुङ, १० बर्षीया छोरी लक्ष्मी गुरुङ र ५ बर्षीया सरस्वती गुरुङको पहिरोमा परी मृत्यु भएको छ । उनीहरुको शव आज विहान पहिरोबाट निकालिएको छ । सो पहिरोबाट एकजनालाई घाइते अवस्थामा गाउँवासीले उद्धार गरी सत्यदेवी स्वास्थ्यचौकीमा उपचारका लागि लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामबहादुर केसीले बताउनुभयो । खनीयावास गाउँपालिका–४, चिउरीखर्कमा पहिरोले एक घर पुरिएको छ । सो पहिरोमा परी शम्शेर घले र कोप्ची घले बेपत्ता भएको इलाका प्
प्रशासनिक जटिलताका कारण परिणाममुखी काम हुन सकेन-मुख्यमन्त्री पोखरेल
बुटवल, असार १४ । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रशासनिक जटिलताका कारण परिणाममुखी काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ । बुटवलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले प्रशासनिक नेतृत्व आत्मकेन्द्रित छ भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर्मचारीको प्रादेशिक सांगठनिक स्वरुप निर्माण नभई उपलब्धि हासिल हुन नसक्नेमा जोड दिँदै संघीय प्रशासनमा व्यापक कटौती आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशले चाहेको जनशक्ति प्रदेशले नै नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अहिले पनि प्रदेशमा रहेका कर्मचारी संघीय कर्मचारी नै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा रहेका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा संघीय सरकारले गर्छ ।” मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर्मचारीको समायोजनको कानून बने पनि प्रभावकारी काम नभएकामा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा स्रोतको बाँडफाँड नभई टुङ
विषाक्त रक्सीले ४ जनाको मृत्यु, आधा दर्जन बिरामी
जनकपुर, असार १४-धनुषाको पूर्वोत्तर कमला नगरपालिकामा विषाक्त रक्सी (घरेलु मदिरा) सेवन गर्दा बुधबार बिहान ४ जनाको मृत्यु भएको छ । आधा दर्जन बढी सिकिस्त छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार कमला नगरपालिका–५, लक्करका ३७ वर्षीय मनिक पासवान, ५५ वर्षीय रामचन्द्र पासवान, ४० वर्षीय रामनाथ पासवान र कमला नगरपालिका–६, सिग्याही मडानका ४७ वर्षीय साविर मियाँ अन्सारीको मृत्यु भएको हो। मनिक, रामनाथ र साविरको गाउँमै तथा रामचन्द्रको उपचारक्रममा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । मंगलबार साँझ अत्यधिक रक्सी सेवन गरेर घर फर्किएका उनीहरूको अवस्था रातिदेखि नै बिग्रन थालेको थियो। सिकिस्त भएका कमला नगरपालिका–५, लक्करका ४० वर्षीय जामुन पासवानको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमै उपचार जारी छ । विन्देश्वर पासवान र असलदेव पासवानको भने फिजिसियन डा.रामपरीक्षण यादवको जनकपुरस्थित क्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ । कमल
Previous 1 … 573 574 575 … 632 Next